Nkwekọrịta anọ ahụ | Martech Zone
Nkwekọrịta Anọ ahụ
Monday, June 4, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'abalị taa, mụ na enyi m na-akparịta ụka Jules. Jules nyefere ụfọdụ amamihe sitere n'akwụkwọ, Nkwekọrịta anọ ahụ, nke Don Miguel Ruiz na Don Jose Luis Ruiz dere.
Dị ka ndụmọdụ kachasị, ọ mara mma, mana ọ siri ike itinye n'ọrụ. Ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị yiri ka ọ na-eme ka anyị ghara ichebe ihe dị ka nke a. Ikekwe ebe ọ bụ naanị anọ, anyị nwere ike nweta ya.
1. Na-enwe ntụpọ n’okwu gị
Jiri ikwesị ntụkwasị obi kwuo okwu. Kwuo naanị ihe ị na-ekwu. Zere iji okwu ahụ na-ekwu okwu megide onwe gị ma ọ bụ na-agba asịrị banyere ndị ọzọ. Jiri ike nke okwu gị duzie ụzọ nke eziokwu na ịhụnanya.
2. Ewerela ihe ọ bụla n’onwe gị
Ọ dịghị ihe ndị ọzọ na-eme bụ n'ihi gị. Ihe ndị ọzọ na-ekwu ma na-eme bụ amụma nke eziokwu nke ha, nrọ ha. Mgbe echiche na omume nke ndị ọzọ na-egbochi gị, ị gaghị ata ahụhụ nke enweghị isi.
3. Emela Nkwenye
Choo obi ike iju ajuju na ikwu ihe ichoro. Soro ndị ọzọ kwukọrịta okwu dịka otu ị nwere ike iji zere nghọtahie, mwute na ihe nkiri. Site na otu nkwekọrịta a, ị nwere ike ịgbanwe ndụ gị kpamkpam.
4. Na-eme ike gị mgbe niile
Ihe kachasị mma gị ga-agbanwe site n'oge ruo n'oge; Ọ ga-adị iche mgbe ahụ dị gị mma n’adịghị ka ọrịa. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla, naanị mee ike gị niile, ị ga-ezere ikpe onwe gị, mmegbu onwe gị na ịkwa ụta.
Ndụmọdụ dị egwu. Echere m na m nwere # 1 ala, # 4 fọrọ nke nta ka ebe… # 2 M dịkwa mma na, ebe m nwere obi ike na onwe m. # 3 chọrọ ụfọdụ ọrụ! Ekele dịrị Jules maka ịgafe nke a! Enwere m ụfọdụ ọrụ m ga-arụ.
PHP: Ndi SimpleXML Akwadoro?
Kpọọ m mgbe ịpụghị Beta, Google Gears!
Jun 5, 2007 na 6:29 AM
Ezigbo ndụmọdụ, Doug. Ndụmọdụ banyere akparamagwa kachasị baa uru, dịkwa ka ị na-ekwu, siri ike.
Jun 5, 2007 na 7:20 AM
Doug. Na-ada ka ihe na-akpali akwụkwọ. Havè gụchaala ya? Ruru ọnụ ahịa nnabata ma ọ bụ ị chịkọtara jewels na ya ebe a na post gị?
O doro anya na njirimara anọ ị ga-agbasi mbọ ike. Ma, mgbe ahụ na-emetụta ịde blọgụ.
Jun 5, 2007 na 8:05 AM
Agụọla m akwụkwọ a ọtụtụ oge na ọ na-agbanwe ndụ na oge mbụ, ndụ na-akwado oge ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ ndị ahụ dị mfe, itinye n'ọrụ (nke miri emi) na ndụ anyị na nke ndị ọkachamara na-ewe ịdọ aka ná ntị na ọchịchọ na-aga n'ihu maka imeziwanye onwe anyị. Ugbu a, ọ bụ ezie na m na-echebara onwe m echiche nke ukwuu na blọọgụ a nke Doug na-agwa ndị ọkachamara na ndị ọkachamara aka karịa ndụ, oke mmetụta anyị dị ukwuu dị ka anyị chọrọ ka ọ bụrụ. A gbasaa nkwekọrịta anọ ahụ n'ime akwụkwọ ahụ ma ọ na-akọwa nkwekọrịta miri emi dị omimi karị.
Mmalite akwụkwọ a na-adọrọ ntakịrị, mana ozugbo ọ banyere n'ime "anụ" ya, agbanweela m… wee gbanwee. Ọ bụrụ na mmadụ niile nwere ike itinye ụkpụrụ ndị a n'ọrụ, anyị ga- gbanwee ụwa.
Jun 5, 2007 na 8:32 AM
O doro anya na ndepụta m dị mkpirikpi maka akwụkwọ iji gụọ, Dawud! Agatụghị m eche banyere ịde blọgụ (duh!), Ma ị ziri ezi - ọ bụ ezigbo ndụmọdụ maka ndị na-ede blọgụ!
Jun 5, 2007 na 5: 23 PM
hmm… .nke m ga-arụ ọrụ siri ike na isi # 2 🙁
Jun 5, 2007 na 9: 25 PM
Ọ bụ eziokwu na nke a siri ike nke ukwuu. Ọ ga-enyere gị aka ichebara ya echiche. Onweghi onye nwere ike ime gị ka ị bụrụ ihe ọ bụla ị bụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị kpọọ m aha ma ọ bụ gwa m ihe ọjọọ banyere onwe m, ọ gaghị emetụta otu m si ele onwe m anya - Ọ B IFR IF na m nwere nchebe na onwe m. Nsogbu dị na ya. Anyị na-ekwe ka nghọta ndị ọzọ banyere anyị metụta ụzọ anyị si aghọta onwe anyị, karịa ịnakwere onwe anyị ma ọ bụ ịgbanwe ihe ndị na-adịghị amasị anyị naanị b / c anyị chọrọ. Ihe i kwenyere na-abụkarị ihe a rụpụtara. Chee echiche banyere ihe ndị dị mma banyere onwe gị, ị ga-amasịkwa onwe gị; na-eche ihe na-adịghị mma na ị gaghị amasị onwe gị.
Eeh, e boro m ebubo ịbụ Pollyanna'ish …… mana ọ bụ ihe nduzi na ndụ m na otu nke na-ejere m ozi nke ọma, ọkachasị taa. 🙂
Jun 6, 2007 na 4:18 AM
nnukwu ndụmọdụ jule 🙂
Daalụ nke ukwuu !
Ikwu ihe ọjọọ na ịntanetị dị mfe. Dị nnọọ pịnye ihe ọ bụla ị chọrọ ke ihe igbe… ..
Ndị mmadụ anaghịdị eche maka mmetụta ọ ga-enwe na blogger…. 🙁
“Chee echiche banyere ihe ndị dị mma banyere onwe gị, ị ga-enwekwa mmasị onwe gị; na-eche ihe na-adịghị mma, ọ gaghị amasị gị. ”
M ga-agbaso ndụmọdụ gị 🙂
Jun 6, 2007 na 7:33 AM
Enweghị m ike ịkwado akwụkwọ a zuru oke - ọ dị mfe ọgụgụ, ma baa uru ịgụkwa ya site n'oge ruo n'oge iji mee ka uche gị laghachi na ogologo. Enyere m akwụkwọ a ọtụtụ afọ gara aga mgbe m na-agabiga "nsogbu siri ike" ọ na - enyere m aka iburu onwe m. # 2 Ewerela ihe ọ bụla n’onwe gị nwere mmetụta dị ukwuu n’ebe m nọ site n’inyere echiche nke onwe m aka.
Ezi nkwanye, Doug!
Nnụnụ Anụ Unlimited
Jul 13, 2007 na 1:55 PM
N'ezie ma ọ bụrụ na ị na-emebi nkwekọrịta # 2 ma ọ bụ # 3 ị na-agaghịkwa enwe mmetụta na okwu gị (nkwekọrịta # 1).
Ọ bụrụ na ị na-ewere ihe n'onwe gị mgbe ahụ ị na-eme ka okwu na-emegide onwe gị mmetụta uche. Nke a abụghị ihe impeccable. Ọ bụrụ na ị na-eme (na-eke n'uche gị) echiche nke na-eduga n'ọdịmma mgbe ahụ ị gaghị enwekwa ntụpọ.
Ngosipụta a na-ach ụ im ụ okwu gi chọkwara ka i mee echiche n’emeghị ihe ọ bụla, yana ịghara ime okwu ga - eme ka ị were ihe n’onwe gị.
Na mbido mbụ ọ na-egosi na Impeccable bụ ihe dị mfe karịa ndị ọzọ. Mgbe ị na-amụ ihe ndị kachasị mma ị ga - achọpụta na nkwekọrịta ndụ # 2,3, na 4 na - eduga gị ka ị nweta Impeccability.
More zuru ezu banyere nke a na http://pathwaytohappiness.com/happiness/2007/01/19/be-impeccable-with-your-word/